745s Mahita ilay mahery fo vaovao Benedetta amin&#39;ny alàlan&#39;ny fijerena ity horonan-tsary ity | MLBB images and subtitles
Eh ry zalahy e. Manova zava-baovao aho. Toa maro ny sakaizanareo mahita ny vaovao vaovao alohan'ny hamoahana azy ireo ao amin'ny mpizara tany am-boalohany. Mampalahelo fa satria ny mpizara dia avy any Azia, no hany fomba ahafahako mizaha ny mahery fo amin'ny fomba fanao. Nefa na izany aza dia hasehoko anao ry zalahy hoe ahoana ny toeran'ny mahery fo vaovao Benedetta amin'ny lalao mahazatra ary manome toro-hevitra sy tricks vitsivitsy aminao mba hahafahanao manana ilay tanana ambony rehefa ny mahery fo dia mamoaka ny mpizara tany am-boalohany. Andao hijery haingana ny fahaizany. Ny pasipaorony dia mamela azy hiakatra ny fanafihana fototra ary hitsoaka mankany amin'ilay lalana ny vatany miatrika. Noho izany dia mila mampiasa an-kaody ankavia ianao mba hamarihana azy hanafika azy. Ity atiny ity dia heverina ho fahaiza-manao, noho izany dia mizana ny fahasimbana ara-batana ary miasa amin'ny ra mandriaka Ax. Tokony ho iray segondra no mandoa ilay pasif, ary ianao irery no afaka mamoaka ny fahaizana rehefa feno izany. Azonao atao ihany koa ny misambotra ilay passive amin'ny alàlan'ny fahasimbana amin'ny fanafihana fototra sy ny fahaiza-manao. Ny fahaizany voalohany dia hiatrika fahasimbana ao amin'ny faritra misy endrika mpankafy. Ity fahaiza-manao ity dia miatrika ny fahavoazana be indrindra ka araraotina hampiakatra azy aloha. Ny fahaizany faharoa dia mitovy amin'ny fahaizana faharoa Lancelot. Raha ataonao tsara io dia azonao atao ny mandrotsaka ny fahaizan'ny fifehezana olona iray ary manakana ny fahasimbana 1 fotoana avy amina loharano rehetra. Mampihena ny lasibatra ho tratrany ihany koa izy, fa raha manakana ny vokatra CC ianao, dia ho tratranao fa aza mivily. Ny farany faran'izy ireo dia ny hampitsahatra azy aorian'ny fahataran'ny fotoana fohy, mampiato ny kendrena rehetra ny lalana. Rehefa avy nianjera dia nanohy ny fahavoazana ny lalana ary hanalefaka ny fahavalo. Tsy ho azo resena koa izy rehefa mandoka. Tamin'ny famakiana ny fahaiza-manao sy ny fitsapana ny mahery fo kely dia tsapako fa hiafarao ianao mampiasa ny pasipany amin'ny ankamaroan'ny fotoana, fa tsy ny fanafihany fototra. Azonao atao ny mampiasa ny passive azy hivezivezy haingana amin'ny sarintany. Tsy mandany na inona na inona izany. Tokony hampiasa ny passive-na izy hanadio ny onjan'ny minion. Tena haingana kokoa noho ny fanaovana izay fanafihana fototra fotsiny. Azonao jerena hoe ahoana no andefasako azy foana fa tsy ny fanaovana fanafihana fototra fotsiny. Rehefa milalao izany maherifo izany ianao dia aza manelingelina ny fampiasana fanafihana fototra, te-hitazona hatrany ary araho ny pasif. Ity no fomba hanolorako azy hanorina azy izao. Koa satria afaka mampiasa tsy tapaka ny fanafihana azy aho, heveriko fa tena ilaina ny fahavelomana ny ràlàlàra Raha ny marina, izao tsy azoko antoka hoe tsara ny End End battle. Nataony ratsy tokoa ity zavatra ity, ka tsy mieritreritra aho fa tena ilaina ny manangana azy io vao maraina ho ao amin'ny lalao. Ity no marika natolotry ny fananganana ahy. Io dia ahafahany manohana bebe kokoa amin'ny lalao voalohany. Mihevitra aho fa tsy tena natao ho an'ny iray amin'ireo tifitra ireo kendrena toa an'i Helcurt sy Lancelot ity maherifo ity. Heveriko fa mitovy bebe kokoa amin'i Leomord sy Thamuz izy. Tsara ny tohana sy famoronana korontana eo amin'ny ady amin'ny ekipa. Rehefa milalao azy ianao dia te-handinika tsara ny passive azy. Isaky ny mamoaka fahaiza-manao izy, dia handoa izany koa, ary ny fara tampony dia handidy izany avy hatrany. Tsarovy fotsiny tsy hanelingelina ny fanaovana fanafihana fototra, fa kosa mitazona ny fanafihana fototra fotsiny ianao hitohizany. Izy io dia miady amin'ny fahasimbana bebe kokoa ary afaka manasitrana anao averina satria asiana fahaiza-manao izany. Tena mahay mandositra izy, satria ny fahaizany rehetra dia tena fahaiza-manao blink. Ny mpifaninana be indrindra aminy dia mety ho i Helcurt sy Khufra. Izy ireo dia hanakana azy tsy hampiasa ny fahaizany tsy hijanona. Mieritreritra aho fa raha mahafehy an'io maherifo io ianao dia ho sarotra ny hamono. Afaka mifehy ny fiaran'ny olona izy raha afaka maka fotoana amin'ny fahaizany faharoa. Afaka mitsoaka foana izy ary ho sitrana. Ary tena mahay mihetsika amin'ny sari-tanety izy. Ny tanjon'ilay pasipainy dia somary sarotra ho fifehezana satria misy fahatarana, fa indray mandeha mampihatra kely azy ianao, mieritreritra aho fa afaka mahazo azy io haingana. Ity maherifo ity dia hanampy ireo mpilalao kamo izay te-hitarika foana ny fahaizany. Ny fahaizany rehetra dia mila fikendrena manual, koa ataoko fa hamorona fahazarana tsara io maherifika io, ka rehefa milalao maherifo hafa izy ireo dia tsy hanao ny tanjon'izy ireo intsony. Ity no fotoana voalohany anaovako ny mahery fo vaovao amin'ny mpizara mandroso, nefa heveriko fa hataoko matetika kokoa io raha betsaka ny olona liana. Eto ianao dia afaka mahita ny fomba nametrahako ny fahaizany faharoa tamin'ny fomba tsara, noho izany dia ny fiarovana ny farany amin'ny Tigré no farany. Hoy aho hoe raha ny marina mahazo hevitra tsara momba ny fampiasana ity maherifo ity dia azo antoka fa ho azonao antoka izany mila fanazaran-tena sasany satria maro ny fahaizany manana karazana fahatarana. Ary ny fanafihana azy dia karazana hafahafa ihany koa ny mikendry azy. Saingy amin'ny ankapobeny, tsy hiteny aho hoe sarotra be io maherifo io. Ka aorian'ity horonan-tsary ity dia mety hahita haingana haingana ianao raha ilay mahery fo dia avoaka amin'ilay mpizara tany am-boalohany.
Mahita ilay mahery fo vaovao Benedetta amin&#39;ny alàlan&#39;ny fijerena ity horonan-tsary ity | MLBB
< start="1.56" dur="0.62"> Eh ry zalahy e. >
< start="2.34" dur="1.24"> Manova zava-baovao aho. >
< start="3.58" dur="3.63"> Toa maro ny sakaizanareo mahita ny vaovao vaovao alohan'ny hamoahana azy ireo >
< start="7.21" dur="1.37"> ao amin'ny mpizara tany am-boalohany. >
< start="8.74" dur="4.54"> Mampalahelo fa satria ny mpizara dia avy any Azia, no hany fomba ahafahako mizaha ny mahery fo >
< start="13.28" dur="1"> amin'ny fomba fanao. >
< start="14.62" dur="4.68"> Nefa na izany aza dia hasehoko anao ry zalahy hoe ahoana ny toeran'ny mahery fo vaovao Benedetta >
< start="19.3" dur="4.289"> amin'ny lalao mahazatra ary manome toro-hevitra sy tricks vitsivitsy aminao mba hahafahanao manana ilay tanana ambony rehefa >
< start="23.589" dur="2.131"> ny mahery fo dia mamoaka ny mpizara tany am-boalohany. >
< start="26.38" dur="1.96"> Andao hijery haingana ny fahaizany. >
< start="29.24" dur="3.86"> Ny pasipaorony dia mamela azy hiakatra ny fanafihana fototra ary hitsoaka mankany amin'ilay lalana >
< start="33.1" dur="1.3"> ny vatany miatrika. >
< start="35.08" dur="3.4"> Noho izany dia mila mampiasa an-kaody ankavia ianao mba hamarihana azy hanafika azy. >
< start="38.98" dur="4.04"> Ity atiny ity dia heverina ho fahaiza-manao, noho izany dia mizana ny fahasimbana ara-batana ary miasa amin'ny ra mandriaka >
< start="43.02" dur="0.52"> Ax. >
< start="44.44" dur="3.9"> Tokony ho iray segondra no mandoa ilay pasif, ary ianao irery no afaka mamoaka ny fahaizana >
< start="48.34" dur="1.2"> rehefa feno izany. >
< start="50.34" dur="3.92"> Azonao atao ihany koa ny misambotra ilay passive amin'ny alàlan'ny fahasimbana amin'ny fanafihana fototra sy ny fahaiza-manao. >
< start="55.38" dur="3"> Ny fahaizany voalohany dia hiatrika fahasimbana ao amin'ny faritra misy endrika mpankafy. >
< start="58.64" dur="3.42"> Ity fahaiza-manao ity dia miatrika ny fahavoazana be indrindra ka araraotina hampiakatra azy aloha. >
< start="62.68" dur="2.8"> Ny fahaizany faharoa dia mitovy amin'ny fahaizana faharoa Lancelot. >
< start="65.62" dur="4.08"> Raha ataonao tsara io dia azonao atao ny mandrotsaka ny fahaizan'ny fifehezana olona iray ary manakana ny fahasimbana 1 fotoana >
< start="69.7" dur="1.04"> avy amina loharano rehetra. >
< start="71.1" dur="4.16"> Mampihena ny lasibatra ho tratrany ihany koa izy, fa raha manakana ny vokatra CC ianao, dia ho tratranao >
< start="75.26" dur="1.1"> fa aza mivily. >
< start="77.18" dur="4.04"> Ny farany faran'izy ireo dia ny hampitsahatra azy aorian'ny fahataran'ny fotoana fohy, mampiato ny kendrena rehetra >
< start="81.22" dur="0.74"> ny lalana. >
< start="82.32" dur="3.94"> Rehefa avy nianjera dia nanohy ny fahavoazana ny lalana ary hanalefaka ny fahavalo. >
< start="86.48" dur="2.42"> Tsy ho azo resena koa izy rehefa mandoka. >
< start="89.46" dur="3.899"> Tamin'ny famakiana ny fahaiza-manao sy ny fitsapana ny mahery fo kely dia tsapako fa hiafarao ianao >
< start="93.36" dur="3.64"> mampiasa ny pasipany amin'ny ankamaroan'ny fotoana, fa tsy ny fanafihany fototra. >
< start="100.16" dur="2.82"> Azonao atao ny mampiasa ny passive azy hivezivezy haingana amin'ny sarintany. >
< start="102.98" dur="1.66"> Tsy mandany na inona na inona izany. >
< start="112.4" dur="2.96"> Tokony hampiasa ny passive-na izy hanadio ny onjan'ny minion. >
< start="115.42" dur="2.3"> Tena haingana kokoa noho ny fanaovana izay fanafihana fototra fotsiny. >
< start="123.6" dur="3.9"> Azonao jerena hoe ahoana no andefasako azy foana fa tsy ny fanaovana fanafihana fototra fotsiny. >
< start="127.7" dur="4.06"> Rehefa milalao izany maherifo izany ianao dia aza manelingelina ny fampiasana fanafihana fototra, te-hitazona hatrany >
< start="131.76" dur="1.54"> ary araho ny pasif. >
< start="137.18" dur="2.32"> Ity no fomba hanolorako azy hanorina azy izao. >
< start="139.74" dur="5.32"> Koa satria afaka mampiasa tsy tapaka ny fanafihana azy aho, heveriko fa tena ilaina ny fahavelomana ny ràlàlàra >
< start="145.6" dur="3.9"> Raha ny marina, izao tsy azoko antoka hoe tsara ny End End battle. >
< start="149.5" dur="4.2"> Nataony ratsy tokoa ity zavatra ity, ka tsy mieritreritra aho fa tena ilaina ny manangana azy io vao maraina >
< start="153.7" dur="0.92"> ho ao amin'ny lalao. >
< start="155.12" dur="1.98"> Ity no marika natolotry ny fananganana ahy. >
< start="157.28" dur="2.88"> Io dia ahafahany manohana bebe kokoa amin'ny lalao voalohany. >
< start="183.04" dur="4.2"> Mihevitra aho fa tsy tena natao ho an'ny iray amin'ireo tifitra ireo kendrena toa an'i Helcurt sy Lancelot ity maherifo ity. >
< start="187.56" dur="2.56"> Heveriko fa mitovy bebe kokoa amin'i Leomord sy Thamuz izy. >
< start="190.24" dur="3.08"> Tsara ny tohana sy famoronana korontana eo amin'ny ady amin'ny ekipa. >
< start="227.08" dur="2.9"> Rehefa milalao azy ianao dia te-handinika tsara ny passive azy. >
< start="230.28" dur="4.94"> Isaky ny mamoaka fahaiza-manao izy, dia handoa izany koa, ary ny fara tampony dia handidy izany avy hatrany. >
< start="247.44" dur="4.72"> Tsarovy fotsiny tsy hanelingelina ny fanaovana fanafihana fototra, fa kosa mitazona ny fanafihana fototra fotsiny ianao hitohizany. >
< start="252.68" dur="3.62"> Izy io dia miady amin'ny fahasimbana bebe kokoa ary afaka manasitrana anao averina satria asiana fahaiza-manao izany. >
< start="280.52" dur="4.76"> Tena mahay mandositra izy, satria ny fahaizany rehetra dia tena fahaiza-manao blink. >
< start="285.88" dur="3.1"> Ny mpifaninana be indrindra aminy dia mety ho i Helcurt sy Khufra. >
< start="289.2" dur="3.16"> Izy ireo dia hanakana azy tsy hampiasa ny fahaizany tsy hijanona. >
< start="336.76" dur="3.08"> Mieritreritra aho fa raha mahafehy an'io maherifo io ianao dia ho sarotra ny hamono. >
< start="340.16" dur="3.34"> Afaka mifehy ny fiaran'ny olona izy raha afaka maka fotoana amin'ny fahaizany faharoa. >
< start="343.82" dur="2.34"> Afaka mitsoaka foana izy ary ho sitrana. >
< start="346.24" dur="2.32"> Ary tena mahay mihetsika amin'ny sari-tanety izy. >
< start="369.68" dur="4.23"> Ny tanjon'ilay pasipainy dia somary sarotra ho fifehezana satria misy fahatarana, fa indray mandeha >
< start="373.91" dur="3.91"> mampihatra kely azy ianao, mieritreritra aho fa afaka mahazo azy io haingana. >
< start="379.68" dur="4.38"> Ity maherifo ity dia hanampy ireo mpilalao kamo izay te-hitarika foana ny fahaizany. >
< start="384.46" dur="4.24"> Ny fahaizany rehetra dia mila fikendrena manual, koa ataoko fa hamorona fahazarana tsara io maherifika io, ka rehefa >
< start="389.12" dur="3.62"> milalao maherifo hafa izy ireo dia tsy hanao ny tanjon'izy ireo intsony. >
< start="657.64" dur="2.82"> Ity no fotoana voalohany anaovako ny mahery fo vaovao amin'ny mpizara mandroso, >
< start="660.56" dur="4.22"> nefa heveriko fa hataoko matetika kokoa io raha betsaka ny olona liana. >
< start="679.42" dur="4.94"> Eto ianao dia afaka mahita ny fomba nametrahako ny fahaizany faharoa tamin'ny fomba tsara, noho izany dia ny fiarovana ny farany amin'ny Tigré no farany. >
< start="693.78" dur="4.36"> Hoy aho hoe raha ny marina mahazo hevitra tsara momba ny fampiasana ity maherifo ity dia azo antoka fa ho azonao antoka izany >
< start="698.14" dur="3.5"> mila fanazaran-tena sasany satria maro ny fahaizany manana karazana fahatarana. >
< start="701.88" dur="2.62"> Ary ny fanafihana azy dia karazana hafahafa ihany koa ny mikendry azy. >
< start="705.2" dur="3"> Saingy amin'ny ankapobeny, tsy hiteny aho hoe sarotra be io maherifo io. >
< start="708.72" dur="3.69"> Ka aorian'ity horonan-tsary ity dia mety hahita haingana haingana ianao raha ilay mahery fo >
< start="712.41" dur="1.91"> dia avoaka amin'ilay mpizara tany am-boalohany. >